Dobera roa na Bôlewheel roa natokana ho an'ny fitrandrahana sira - Ellicott Dredges
Komitin'ny Ellicott® Bucketwheel Dredgers ho an'ny Fitrandrahana sira ao Saudi Arabia sy Shina
Oktobra 30, 2010
Source: Fanamboarana dredging iraisam-pirenena & fanamboarana seranan-tsambo
Ellicott® Ny International of Baltimore, Maryland, Etazonia, no nanatanteraka ny voalohany amin'ireo dredger sôbôka roa izay hampiasaina amin'ny indostrian'ny fitrandrahana sira ao Saudi Arabia sy i Shina.
Ny voalohany tamin'ny baiko roa dia ny hanome special drilger an'ny siny-elektrika ho an'ny Saudi Petrochemical (SADAF). Ny SADAF dia hampiasaina amin'ny fiaraha-miasa Shell ary Saudi Arabia Basic Industries Corp. (SABIC), ho ny sira vatolampy tao amin'ny zavamaniry ao Jubail, Arabia saodita, izay avy eo no hikarakara ny klôtinina ho an'ny PVC sy soda caustic.
Ilay dredger vaovao dia hampiakatra ny famokarana an'io zavamaniry io, raha ny filazan'ny SADAF satria ny tahan'ny 95 isanjaton'ny 25 isan-jato dia tsara noho ny an'ny dredger efa misy an'i SADAF ary noho ny haitao avo lenta. Anisan'ireo fiasa izay i Ellicott® nampidirina tao amin'ny dredger, ny famolavolana kodiarana mahery vaika, azo antoka tsara ny hafainganam-pandeha amin'ny fitaterana herinaratra AC, ary koa ny hydraulics an'ny fanjakana.
Ny kodiaran-drindrina 600 HP an'ny dredger dia ny HP indrindra ampiharina amin'ny kodiarana 94 ″ (2388 mm), ary midika izany fa afaka mamonjy ireo hery fanapahana avo lenta takiana izy. Ellicott® mino ny fametrahana sira sira monolitikma ao Arabia Saodita dia misy ny fihary mafy indrindra amin'ny harena ankibon'ny tany amin'ny tany mampiasa ny siny-drelger.
Ny kaomandy faharoa an'ny orinasa dia manaraka ny fanombanana 2 taona manerantany nataon'ny Sinoa izay niafara tamin'ny fifidianana ny Ellicott® marika B890, dredger bucketwheel 14 ″ ho an'ny orinasa Xingjiang Salt Lake Chemical, hampiasaina amin'ny toeram-pitrandrahana sira any andrefan'i Sina.
Ny fananganana fenitra B890 dia havaozina hijerena ny fepetra mivaingana.
Ny tena fototry ny Ellicott® Brand Series B1990E
Total HP - 2100 (1100 amin'ny paompy tohatra sy fanampiana 1000)
Bucketwheel - Hydraulika 600 HP, kodiarana roa ambin'ny folo ″
Loharanon-kery pump - 1100 HP, motera rotor AC maratra miaraka amin'ny fanaraha-maso hafainganam-pandeha
Famokarana famolavolana - 400 TPH
Ny tena fototry ny Ellicott® Brand Series B890
Total HP - 914 (624 amin'ny paompy amam-bato, CAT 3412 ary CAT 290 fanampiny 3406)
Bucketwheel - Hydraulika 150 HP, kodiarana roa ambin'ny folo ″
Paompy - Ellicott® 14 "
Navoaka indray avy amin'ny International Dredging & Port Construction